Kooxda Barcelona oo bedelka Ivan Rakitic 52 milyan oo gini uga soo qaadanaysa Paris Saint-Germain – Gool FM
(Barelona) 17 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay bedelka Rakitic ka dhex-aragto Paris Saint-Germain, iyadoo ka soo qaadanaysa Marco Verratti.
26-sano jirkaan ayaa 288 kulan u saftay kooxda PSG tan iyo markii uu kooxda reer France uga soo dhaqaaqay naadiga Pescara sanadkii 2012-kii.
Verratti ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Paris sanadihii ugu dambeeyay, laakiin qandaraaskiisa haatan uu kula jiro kooxda Tababare Thomas Tuchel ayaa dhici doona xagaaga 2021-ka.
Sida ay warinayaan wararka laga helayo gudaha dalka Spain, wakiilka laacibkan ee Mino Raiola ayaa ku wargaliyay PSG in xiddiga uu wakiilka u yahay ee Verratti uu doonayo tartan cusub, isla markaana uu soo jiitay indhaha kooxda mudada dheer xiiseynaysay ee Barcelona.
Xiddiga xulka qaranka Talyaaniga ayaa lagu soo waramayaa inuu ku bixi lahaa lacag dhan 52 milyan oo gini, taasoo aan u muuqan inuu iska diido kooxda haysata horyaalka Spain, maadaama ay iyaguna suuqa u gali lahaayeen bedelka laacibkooda aan weli saldhigan ee Ivan Rakitic.
Verratti ayaa ku guuleystay lix jeer horyaalka Ligue 1 intii lagu guda jiray waqtigiisa garoonka Parc des Princes, laakiin weli ma uusan dhadhamin koob Yurub ah, iyadoo kooxda reer France ay halkeedii ka sii wadayso tartanka Champions League.